तपाईं कुन दिशामा शिरानी राखेर सुत्नुहुन्छ ? भुलेर पनि यो दिशामा नराख्नुस् | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more तपाईं कुन दिशामा शिरानी राखेर सुत्नुहुन्छ ? भुलेर पनि यो दिशामा नराख्नुस्
असार ७ गते, २०७६ - १३:२५
एजेन्सी । सुत्नका लागि उपयुक्त दिशामा शिरानी हुन जरुरी छ । वायुमण्डलका उर्जाका नकारात्मक किरण शरीरमा प्रवेश गर्दा जीवनमा नकारत्मक प्रभाव पर्ने भएका कारण उर्जा कम गर्नका लागि वास्तुको विशेष महत्व भएको वास्तुशास्त्रमा उल्लेख छ ।
गृहस्वामीको मुख्य शयनकक्ष घरको दक्षिण या पश्चिम दिशामा हुनुपर्छ।
पृथ्वीको दक्षिणमा ध्रुव र शिरको रूपमा मनुष्यको उत्तरी ध्रुवले ऊर्जाको एउटा धारा पूर्ण पार्छ। त्यसैप्रकार पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव र मनुष्यको खुट्टाको दक्षिणी ध्रुवले पनि उर्जाको अर्को धारालाई पूर्ण पार्छ र चुम्बकीय तरङ्गको प्रवेशमा बाधा उत्पन्न हुँदैन।
त्यस्तो हुने भएकाले सुतेको मानिसलाई शान्ति एवं गहिरो निन्द्रा लाग्छ। यसबाट राम्रो बुद्धिको विकास हुन्छ र साथै घरमा पनि सुख-समृद्धि एवं सम्पन्नता हुने गर्छ।
यदि दक्षिण दिशामा शिरानी राख्न सम्भव हुँदैन भने पश्चिमतर्फ राख्न सकिन्छ। अन्य दिशामा पलङ्ग र शिरानी राख्नाले बुद्धि सञ्चालन ठीकसँग हुन पाउँदैन।
सुत्नको लागि पूर्व सबैभन्दा राम्रो हो । उत्तर पूर्व पनि सुत्न सकिन्छ । पश्चिम राम्रो मानिन्छ । दक्षिण पनि राम्रो नै हुन्छ । तपाई पृथ्वीको उत्तरी गोलाद्र्धमा हुनुहुन्छ भने उत्तर बाहेकको सबै दिशामा सुत्नु राम्रो हो । तर दक्षिणी गोलाद्धमा बसोबास गर्नेका लागि भने दक्षिण शिरानी गर्नु हुँदैन।
असार ७ गते, २०७६ - १३:२५ मा प्रकाशित
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका महिलालाई रकमसहित यौन प्रस्ताव
मृत्युपछि वीर्यदान गर्न दिनुपर्छ
प्रेरक प्रशंङ्ग : शत्रुलाई पनि मित्र कसरी बनाउने ?
अश्लील चलचित्रको लतमा परेका छन् किशोरकिशोरी र महिला पनि
सेक्स सम्बन्धि प्रचलित १८ नियम
बढी सेक्स गर्छन् सानै उमेरमा कार चलाउन थाल्नेहरू : एक अध्ययन
मानिसको यौन जीवनलाई नै उजाड पारिदिने के हो यौन दुर्बलता ?
नराम्रो सपना देखेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुस् दोष काटिन्छ
यी १२ किसिमका मानिस, जसको जीवन सधैँ दरिद्रतामै बित्छ
महाभारतको कथामा के छ ? पढ्नुहाेस् महाभारतकाे छाेटाे कथा
यी हुन् धर्मशास्त्रमा उल्लेख भएको मानिसमा हुनुपर्ने ३२ लक्षण